ပန်ဂျရှာ တောင်ကြား - ဝီကီပီးဒီးယား
ခြင်္သေ့ငါးကောင်တောင်ကြားဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော ပန်ဂျရှာတောင်ကြား (Dari: درهٔ پنجشير‎) သည် အာဖဂန်နစ္စတန်မြောက်အလယ်ပိုင်းရှိ တောင်ကြားဖြစ်ပြီး မြို့တော် ကဘူး၏ မြောက်ဘက် ၁၅၀ ကီလိုမီတာ (၉၃ မိုင်) အကွာတွင် ရှိသည်။ ဟင်ဒူကွပ်တောင်တန်းအနီးတွင် ဖြစ်သည်။  တောင်ကြားတွင် ပန်ဂျရှာမြစ် ဖြတ်စီးနေပြီး လူ ၁၀၀၀၀၀ မျှနေသော ဒေသတည်း။ အာဖဂန်နစ္စတန်၏ လူမျိုးကြီးတခုဖြစ်သော တာဂျစ်တို့ ဌာနီဖြစ်သည်။  ယခင်က ပါဝမ်ပြည်နယ်ဝင်ဖြစ်သော်လည်း ၂၀၀၄ ခု၊ ဧပြီတွင် ပန်ဂျရှာပြည်နယ်ဟု သီးခြားဖြစ်လာသည်။ 
၂၀၂၁ ခု၊ အောက်တိုဘာလတွင် တာလီဘန်တို့အား ခုခံမည့် ခံတပ်အဖြစ် ရွေးထားသည့်နေရာ ဖြစ်သည်။ 
↑ "Afghanistan gets rid of heavy arms in Panjshir". Xinhua. 2005-03-06. Archived from the original on 2006-10-16. Retrieved 2006-11-22.
↑ "Afghanistan". Library of Congress Country Studies. Library of Congress. 1997. Retrieved 2006-11-19.
↑ American Forces Press Service (5 July 2006). "New Afghan Road Offers Gateway to Optimism Archived 30 September 2017 at the Wayback Machine.". archive.defense.gov. U.S. Department of Defense. Retrieved 16 August 2017.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပန်ဂျရှာ_တောင်ကြား&oldid=699043" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၁၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။